Google Analytics manangana Data Studio (Beta) | Martech Zone
Alarobia 24, 2016 Douglas Karr
Google Analytics dia nanomboka Data Studio, mpiara-miasa amin'i Analytics ho an'ny fananganana tatitra sy tabilao.
Google Data Studio (beta) dia manome ny zavatra rehetra ilainao hanovana ny angon-drakitrao ho tatitra tsara sy mampahalala izay mora vakiana, mora zaraina ary azo ovaina tanteraka. Data Studio dia mamela anao hamorona tatitra manokana 5 miaraka amin'ny fanovana sy fizarana tsy voafetra. Maimaimpoana daholo - any Etazonia ihany no misy izao
Google Data Studio dia vaovao sary an-tsaina vokatra mampifandray angona amin'ny vokatra Google marobe sy loharanom-baovao hafa - manova azy ho tatitra tsara sy mifanakalo ary dashboard miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fotoana tena izy. Ity misy ohatra momba ny varotra marketing:
Izahay dia naka santionany amin'ny fitaovana tsara sasany izay mifangaro amin'ny Google Analytics hananganana tatitra tsara tarehy, toy ny Wordsmith ho an'ny Marketing, sehatra iray namboarina ho an'ireo masoivoho handinika, hanitsy ary handefa safidin'ny Google Analytics safidy mahazatra amin'ny mpanjifany. Toa mifaninana mifanatrika izy io, ahafahan'ny fanaingoana ny tatitra izay azo zaraina mora foana.
Raha tsy misy fitaovana, matetika ireo mpampiasa Analytics dia nanondrana ny angon-drakitra ary avy eo natosiny tao anaty takelaka hamoahana ireo tatitra voamarina. Mandresy an'io ny Google Data Studio, manome fidirana amin'ny fotoana tena izy izay sady mivantana no mavitrika.
Endri-javatra ao amin'ny Google Data Studio:
Mampifandray amin'ny Google Analytics, AdWords ary loharanom-baovao hafa miaraka amin'ny mora.
Mampiray ny angona avy amin'ny kaonty Analytics isan-karazany sy ny fahitana ao anaty tatitra iray ihany.
Ataovy miavaka tatitra tsara tarehy sy voafaritra tsara ho an'ny endrika sy tsapa an'ny fikambanananao.
Share ny angona tianao hizara amin'ny olona manokana na vondron'ireo mpampiasa fotsiny.
Amin'izao fotoana izao dia misokatra ho an'ny tany Etazonia ihany ny beta.
Andramo ny Google Data Studio
Tags: tahirin-kevitra momba ny analyticssary an-tsaina ny angona analyticsgoogle adwordsgoogle visualization data adwordsgoogle fanaovana tatitra momba ny adwordsGoogle Analyticsstudio fanadihadiana data googlegoogle datastudio data data googlegoogle data visualizationWordsmith ho an'ny Marketing
Aug 25, 2016 amin'ny 8: 29 AM
tena manintona. Izay endri-javatra manokana hafa na nohavaozina.